onlineakhabar.com: हेर्नुहोस् !! उत्रन नहुँने ठाउँमा उत्रिएका कारण हेर्दाहेर्दै यि महिलालाई बाघले खायो (भिडियो)
Amazing News, Amazing Video, Amazing Woman, China News, International, Social Networking, Video, Viral Video » हेर्नुहोस् !! उत्रन नहुँने ठाउँमा उत्रिएका कारण हेर्दाहेर्दै यि महिलालाई बाघले खायो (भिडियो)
हेर्नुहोस् !! उत्रन नहुँने ठाउँमा उत्रिएका कारण हेर्दाहेर्दै यि महिलालाई बाघले खायो (भिडियो)
चाइना बेइजिङको वाइल्डलाईफ पार्कमा एक महिलालाई बाघले आक्रमण गरेको छ । यस घटनामा महिलाको मृत्यु नै भएको छ । यी सबै घटनाको भिडियो एक सिसिटिभी क्यामरामा कैद भएको छ । जुन भिडियो यतिबेला सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भैरहेको छ ।
भिडियोमा नै सपष्ट देख्न सकिन्छ कि उक्त महिला कारको बाँया साइडको ढोका उभिएकी छन् । अचानक बाघ आएर उनलाई खिसार्दै लगेको छ । उनको परिवारले उनलाई बचाउने कोशिस गर्दछन् तर उनिहरुको कोशिसले ति महिलालाई बचाउन सक्दैनन्, अन्तत उनको मृत्यु हुन्छ । उनि जहाँ उभिएकी थिइन् त्यो ठाउँमा कार बाहिर उभिन मनाहि थियो । तर उनको लापर्वाहिका कारण ज्यान गएको भनि त्यहाँको लोक्कल मिडियाले बताएको छ ।
हेर्नुहोस् तपाईपनि उक्त भिडियो
Tags : Amazing News Amazing Video Amazing Woman China News International Social Networking Video Viral Video